Ma ogtahay waxa seo ee suuq geynta?
Waa su'aal sax ah. Waa maxay SEO ee Suuq-geynta Dijital ah (DM)? Xaqiiq ahaan, Optimization Search Engine (SEO) ma shaqeynayo hal-u-shaqeeynta keligiis. Waxaan aaminsanahay in fahamka qoto dheer ee arrintaani ay kaa caawineyso inaad sare u qaaddo waxtarkaaga liiska.
Ka hor inta kale, qaybta libaax ee khabiirada SEO ah ayaa loo isticmaalaa in ay noqdaan kuwo horumariya software, waxay ku lug lahaayeen gabadha webka, ama inta kale ee computerka. Aniga ahaan, aniga looma tababarin sida badeecada, sidaas darteed wax fikrad ah uma laha waxa SEO ee Digital Marketing sidoo kale. Dabcan, yoolka koowaad ee naqshadaynta raadinta waa in la helo darajada sare ee SERPs - makhsoom com.
Hase yeeshee, weli qiimo aad u badan oo ka mid ah geeddi-socodka suuq-geynta asalka ah, halka xidhiidhkooda SEO-da inta badan la dayacay inta badan. Ku dhajinta Ingiriisi cad, mashiinnada raadinta (sida laftiisa Google) waxay rabaan inay dadka u oggolaadaan natiijooyinka ugu fiican, markaa waxaa laga yaabaa inay ku qanacsan tahay isticmaalka internetka iyo ka qeyb qaadashadu inay yihiin qodobada ugu xooggan ee SEO, halkii aan ka fikiray kahor. Taasi waa sababta aan u aaminsanahay in SEO ay noqotay qayb ka mid ah geeddi-socodka suuq-geynta caalamka. Waxaan loola jeedaa suuq firfircoon oo si wadajir ah ula shaqeynaya SEO-ga fiican ayaa ah sida kaliya ee lagu gaari karo heerka bogga sareeya oo ku raaxaysta socodka gaadiidka.
Sidaa darteed, maxay yihiin SEO ee suuq geynta digital, si sax ah? Si aad u hesho dakhliga sare ee ganacsigaaga internetka ee 2017, waa inaad noqotaa mid SEO ah oo aad u firfircoon, adoo u dhaqma sida badeeco khibrad leh isla waqti isku mid ah. Hoos ka eeg, aynu ka wada hadalno qaabka ugu casriyaysan casriyeynta SEO iyo qaar ka mid ah fikradaha suuq-geynta asalka ah. Sidaa daraadeed, aan aragno waxa Suuq-geynta Dijital ah ee ay tahay in la sameeyo Mashiinka Raadinta.
Waxaan dooneynaa in aan indha indheynayno afarta laf-dhabarka ee suuq-geynta suuqa oo la helay xiriirka ugu adag ee leh Search Engine Optimization. Marka la eego qeexidda asalka ah, suuq-geynta ayaa kaliya dejiya alaabada saxda ah ama adeegga ee dhagaystayaasha suuqa ee saxda ah, waqtiga saxda ah iyo soo-socota qiimaha saxda ah. Aynu ka takhaluso waxyaabo aad u culus oo aan waxtar lahayn oo isla markiiba ah. Waxaan ula jeedaa, waxaa jira afar meelood oo muhiim ah oo ka mid ah Suuq-geynta Dijital: alaab, qiimo, meel, iyo dallacsiin.
Dhab ahaantii, waxaan u baahannahay halkan waa inaanu wadaagno dhammaan qaybahaas. Aynu wajahno - waxaa jira waxyaabo badan oo loo baahan yahay in lagu xalliyo khibradda Suuq-geynta Dijital ah. Waxaan dareemeyn karnaa inaan bilaashno si aan u hagaajinno walxaha oo dhan sheyga laftiisa, qiimaha, meeleynta qaybinta, iyo dhiirigelinta suurtogalnimada dalab kasta. Waxaan loola jeedaa inaanay jirin wax ka fekeraya wax kale oo sifo ah, haddii qiimaha alaabtaadu ay aad u sarayso, tusaale ahaan.
Si aad u aragto guul weyn oo suuq ah, waxaad u baahan doontaa inaad isku xirto inta u dhaxaysa suuqa xorta ah ee aad ka shaqeyso, isku xirka heerkaaga guud ee tartanka. Oo wax walbana waa kuu sahlanaan karaan haddii aad qiimeyso guud ahaan guusha SEO-gaaga ah - adigoo isbarbar dhigaya inta aad ka heleyso tooska ah ee gaadiidka dabiiciga ah. Habkaa, waxay noqoneysaa suurtagal in la hagaajiyo istaraatiijiga guud ee SEO adoo tixgelinaya qiimaha alaabtaada. Sidaa oo kale, u fakar sidan oo kale meesha iyo habka kor u qaadista.